Malunga nathi -I-Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
Iqela le-Hebei Shenli Rigging ligxile ngokukodwa kuyilo, ukuhanjiswa kunye nokuhanjiswa kweemveliso ezahlukeneyo zokubamba izixhobo kunye nokuphakamisa izixhobo e China kwisithuba esingaphezulu kweminyaka engama-20.
Yasekwa ngonyaka ka-1998, inkampani yethu yi-mveliso egxile ekuphakamiseni izixhobo kunye nemveliso kubandakanya iBanga le-80 hook, iBakala 80 ikhonkco lokudibanisa, iBanga lama-80 ikhonkco lokudibanisa, iBanga lama-80, amatyathanga eBanga lama-80 kunye nezinye izixhobo zokuphanga zeBakala 80 neBanga 100.
Inkampani yethu ihlala ibambe indawo ekhokelayo ngokwendlela yemveliso, itekhnoloji kunye noomatshini abaphambili. Sinezixhobo ezingaphezu kwe-100 zezixhobo kunye namaziko, ngaphezulu kweeseti ezili-10 zovavanyo novavanyo loomatshini ukuqinisekisa ubungakanani kunye nomgangatho wethu.
Senze inkqubela phambili yoyilo lwe-2D kunye ne-3D ye-CAD, iziko lokubumba le-CNC kunye nezinto zenzululwazi zenkqubo yeelebhu yovavanyo. Sine R & D amandla emveliso epheleleyo kuzo zonke iintlobo zeemveliso zomgunyathi kunye nezinye iimveliso zobuqhetseba ngokunjalo.
Inkampani yethu ityale imali ngaphezulu kweefektri ezi-5 ezivelisa iisilingi, iibhloko zetyathanga, ilori yesandla kunye nezinye izixhobo zokuphakamisa. Sinabahambisi abangaphezulu kwama-600 kwimakethi yasekhaya. Siye saseka nokuphuhlisa intsebenziswano yethu ngamazwe kwiminyaka eli-10. Kude kube ngoku, iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe amaninzi nakwimimandla kwihlabathi liphela.
Inkampani yethu isidlulisile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001 ngo-2010 kunye ne-ISO 14001 yokulawulwa kwenkqubo yokusingqongileyo ngo-2015. Zonke iimveliso zethu zigqithile kwizatifikethi ze-EU CE kubandakanya nekhonkco lethu lokuphakamisa iBakala 80. Uphawu lwentengiso "JULI" lwamkelwa njenge- "CHINA FAMOUS BRAND" ngo-2013 kwaye sibe lilungu kwi "CHINA QUALITY SECRITY ENTERPRISE ASSOCIATION".
Inkampani yethu ijonge ukuba nentsebenziswano yokuphumelela kunye nabathengi kwihlabathi liphela. Abasebenzi bethu balinywe kakuhle, banamava atyebileyo kwitekhnoloji kunye nokusebenzela ulwazi. Sinokukunika ingcebiso kunye nesisombululo kwiingcali ukuxhasa iimfuno zabathengi bethu.
Iimveliso zethu ziye zamkelwa njenge "HEBEI IMVELISO EZIDUMILEYO" kunye negama lethu "JULI" laziwa njenge "CHINA FAMOUS BRAND" ngo-2013 kwaye siye saba lilungu "CHINA QUALITY SECRITY ENTERPRISE ASSOCIATION".